चैत्र २३ गते देशभर प्रदर्शन हुने 'तिमीसँग' फिल्ममा के छ? | Suvadin !
चैत्र २३ गते देशभर प्रदर्शन हुने 'तिमीसँग' फिल्ममा के छ?
चैत्र २३ गते बाट देशभर प्रदर्शन हुने मिति तय गरेका राना 'तिमीसँग'को सम्पादन सकेर अहिले प्रोमोको लागि के गर्ने कहाँ गर्ने जस्ता विषयमा व्यस्त रहेका छ्न्। फिल्ममा साम्राज्ञीसँगै नाजिर हुसेन र आकाश श्रेष्ठको मुख्य भूमिका छ।
Jan 07, 2018 18:52
चलचित्र 'तिमीसँग'काे ब्यानर।
जीवन पाैडेल, काठमाडाैं, २३ पुस – छाेटाे समयमै सर्वाधिक रुचाइएकी चर्चित अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित फिल्म 'तिमीसँग' अाउँदाे चैत २३ गते प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा लामाे समयकाे अनुभव बोकेका शिशिर राणा पछिल्लो समयममा आएर 'तिमीसङ' फिल्म रिलिजको प्रतीक्षामा रहेका छन्।
चैत्र २३ गते बाट देशभर प्रदर्शन हुने मिति समेत तय गरेका राना 'तिमीसँग'को सम्पादन सकेर अहिले प्रोमोको लागि के गर्ने कहाँ गर्ने जस्ता विषयमा व्यस्त रहेका छन्। फिल्ममा साम्राज्ञीसँगै नाजिर हुसेन र आकाश श्रेष्ठको मुख्य भूमिका छ।
यो फिल्म नेपालको काठमाडौं, पोखरा, घान्द्रुक, टाँडापानी देउराली, घोरेपानी पुन्हिल अन्नपूर्ण बेस क्याम नवलपरासी जस्ता ठाउमा छाँयाकन गरिएको छ।
यो फिल्ममा डेढ करोडकाे लगानी रहेकाे र देशको एउटा गम्भीर विषयलार्इ उठान गरी त्यसै अनुसार पात्रहरु चयनगरिएकाे हुनाले अपेक्षा गरेअनुसारकाे चलचित्र निर्माण भएकाे निर्देशक, निर्माता तथा लेखक राणाले बताएका छन्। 'याे फिल्म माैलिक कथामा बनेकाे छ' – उनले भने।
यस अघि भाद्र ८ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको यो फिल्म भाद्र १६ गते साम्राज्ञी अभिनीत नै फिल्म 'ए मेरो हजुर २' प्रदर्शनमा आउने भएपछि 'तिमीसँग' भाद्र ८ गतेको रिलिज मिति स्थगित गरिएको थियो।
'तिमीसँग' साम्राज्ञी अभिनीत तेश्रो फिल्म हो। फिल्मको यसअघि नै दुई गीत र ट्रिजर सार्वजनिक भइसकेको छन्। यसअघि सार्वजनिक गीतले पनि निकै चर्चा बटुलेका कारण चलचित्रबाट पनि राम्राे बिजनेसकाे अाशा गरिएकाे चलचित्र निर्माण यूनिटले बताएकाे छ। निर्माता शिशिर राणा यो फिल्मबाट निर्देशनमा डेब्यु गर्दैछन्।